भाग्यमानी मानिससँग मात्र हुने यी ६ कुरा, तपाईसँग छ’ कि छैन? थाहा पाउनुहोस् – Kavreonline Patra
मुख्य पृष्ठ /Entertainment/भाग्यमानी मानिससँग मात्र हुने यी ६ कुरा, तपाईसँग छ’ कि छैन? थाहा पाउनुहोस्
यदि कुनै मासिनको जीवनमा यी ६ कुराहरु प्राप्त छन भने उ कहिल्यै पनि दुःखी हुँदैन । यो कुरा महाभारतको उद्योग पर्वमा उल्लेख छ । श्लोक यसप्रकार छ : अर्थाथमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, वश्यश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या षट् जीव लोकेषु सुखानि राजन् ।। अर्थ : धन, निरोगी शरीर, सुन्दर पत्नी, मीठो बोल्ने,
आज्ञाकारी पुत्र र धनप्राप्त गर्ने विद्या यी ६ कुराले मानिसलाई सुख दिन्छ ।